Intombazana enguBarbie nguAqua - Okunye
Intombazana enguBarbie nguAqua
Nangona amagama abonakala engenantsingiselo, banokwenza ingxelo malunga nexabiso elinyusiweyo lesibheno sesini eluntwini. Ngamanqindi amancinci ngokungaqhelekanga kunye namabele amakhulu, oonodoli bakaBarbie abalingani ngokuchanekileyo, abathi abagxeki bakhe bakhokelela kukuzithemba kunye nemicimbi yomzimba kumantombazana amancinci. Umenzi kaBarbie, uMatel, uphendula kwezi zityholo ngokuchaza ukuba uBarbie akufuneki ukuba abe yinyani, kwaye ukumila kwakhe okumangalisayo kuyilelwe ukuba kumenze kube lula ukugqoka nokunxiba.
I-Aqua liqela leemvumi zaseScandinavia kunye nee-DJs ezazenziwe ekuqaleni phantsi kwegama elithi Joyspeed. Oku kuvelise impumelelo kwitshathi encinci kwingingqi yabo yemveli, kodwa iqela lakhula ladana kwaye laqala njenge-Aqua.
Oku kwabhalwa emva kokuba iqela libone umboniso 'weNkcubeko yeKitsch.'
UMattel walimangalela eli qela, esithi baphule uphawu lwentengiso lukaBarbie kwaye bajika uBarbie waba yinto yokwabelana ngesondo, bebhekisa kuye njengo 'Blonde Bimbo.' U-Aqua ubanga ukuba uMattel ufakele intsingiselo yazo kwiingoma zomculo. Ngo-2002, ijaji yagweba ukuba le ngoma yayikhuselwe njengentetho yasimahla phantsi kohlenga-hlengiso lokuqala, yaza yalahla nenkcaso yenkampani erekhodayo ka-Aqua nxamnye noMattel. Ujaji wathi kwisigwebo 'Amaqela acetyiswa ukuba aphole.' Ityala lagxothwa, kwaye kwinkqubo, lafumana imithombo yeendaba emininzi yengoma kunye nebhendi.
Ekupheleni konyaka we-1997, kwiinyanga ezimbalwa emva kokuba le ngoma ifike kwiitshathi zaseMelika, uMattel wabhengeza ukuba batshintsha umzimba kaBarbie okwesihlandlo sesithathu kwimbali yakhe. Umzimba omtsha kaBarbie wawunomlenze okhudlwana, isinqe esincinci kunye namabele awayencitshisiwe kwibhotile ethembekileyo ka-B.
I-Aqua ayiloqela lokuqala ukumangalelwa ngaphezulu kukaBarbie. UMlawuli uTodd Haynes wamangalelwa nguMattel ngokusebenzisa kwakhe unodoli kwifilimu yowe-1987 I-Superstar: Ibali likaKaren loMchweli .
I-Aqua ibe nempumelelo kwezorhwebo eDenmark naseSweden kunye nomntu wokuqala ongatshatanga naye, 'IiRoses zibomvu,' eya ku- # 1 apho. Eli qela lithathwa njengothusayo e-United States, kodwa eNgilani, balandela 'uBarbie Girl' ngokunye okungaphaya # 1: 'UGqirha Jones' kunye 'nokuBuya emva kwexesha.'
USara Webb-Hitchin, eUnited Kingdom
IBlender ulinganise le ngoma ye-33 imbi kakhulu kwinqaku lakhe lowama-2004 elithi 'Balekelani Ubomi Benu! Ziingoma ezingama-50 ezimbi kunazo zonke! ' kwicandelo elinesihloko esithi 'Scandi-wegian pedo-pop alert! Erk! ' Bacebisa ukuba 'mhlawumbi ukungcakaza kwakuvakala ukuba kwamkelekile kwimvumi yaseNorway uLene Nystrom,' kodwa 'ngesiNgesi ayilunganga kwaphela.' Babhale '' umrepha '' Rene Dif's basso profundo 'yiza, Barbie, masiye epatini' njengeyona nxalenye imbi yengoma.
Ngo-1945 uRuth Handler kunye nomyeni wakhe uElliot basungula inkampani yokudlala uMatel kunye nomhlobo wabo osenyongweni uHarold Mattson. Umbono kaBarbie weza emva kokuba uRuth ebukele intombi yabo uBarbara esika oonodoli kwiimagazini kwaye ekhetha ngononophelo iimpahla kunye nezinto zokunxiba. Zonke ezinye oonodoli kwintengiso ngelo xesha zazingoonodoli, kodwa uRuth waqonda ukuba zinokubakho unodoli oneempawu zabantu abadala, evumela abantwana ukuba benze amaphupha abo. UBarbie, owathiywa ngegama lentombi yabo, wenza amatyala akhe eNew York Toy Fair ngo-Matshi 1959 kwaye wathatha iivenkile zokudlala ngaphesheya kwe-US ngesiqhwithi-ngaphezulu kweedoli ezingama-351,000 zathengiswa ngaloo nyaka ngeedola ezintathu nganye. Namhlanje, uBarbie yeyona nto ithengiswayo emhlabeni - ngaphezulu kweedola ezigidi zathengiswa ngo-1959 kumazwe ali-150 ahlukeneyo.
ungakuchukumisi nini oku kuphuma
Ngamanye amaxesha ndiye ndizinike iingoma ezihambayo
I-bill medley bendinexesha lobomi bam
inkwenkwe egama limangalela umbhali wengoma